Kismaayo News » Jubbaland ciidamo ka gadooday oo la laayay
Jubbaland ciidamo ka gadooday oo la laayay
Kn: Ilaa 20 askari oo sita 2 gaadiidka dagaalka ah ayaa si caro ah uga baxsaday ciidamada nabadsugidda ee Kismaayo kuwaasi oo sida la sheegay ka gadooday askari kale oo maamulka magaalada Diif ay xabsiga dhigeen. Askartani ayaa la sheegay inuu qorshahoodu ahaa inay xabsiga ka sii daayaan askariga, talaabana ka qaadaan gudoomiyaha magaalada Diif oo ay u aanaynayeen inuu ka danbeeyay xarigga askariga, laakiin ciidamada Jubbaland ee magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobleey uu ku baxay ayaa ku helay dhexda inta aysan gaarin Diif.
Shalay galinkii danbe dagaal dhex maray labada dhinac ayaa la sheegayaa in askartii gadoodka ahayd laga reebay labadii gaadiidka ahayd, wiilna ka dhintay halka wiil dhaawacmay 2 kalana iska soo dhiibtay. Askarta intii kale oo diiday inay isdhiibaan ayaa duurka galay, waxaana la sheegayaa in ciidamada daraawiishta Jubbaland ay ku raad joogaan. Odayaal dhaqameed isku dayay inay arinta dhex galaan ayay saraakiisha ciidamada Jubbaland ku gacansayreen ayagoo sheegay inaysan gorgortan ka galaynin ciqaab marinta askariga ama askartii isku dayda inay ku kacdo falal fowdo iyo kutumasho sharci.
Askarta gadooday ayaa la sheegayaa inay ku jifo hoose yihiin madaxweynaha dawlad gobolleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam. Nabadsugidda Jubbaland oo askartani ka tirsanayd wali wax war ah kama soo saarin gadoodka askartan iyo waliba waxa dhaliyay in tiro intaasi le’eg ay isku raacaan fal ay naftooda ku haligayaan.
Marka laga tago dhacdadan, waxaa muuqata khatarta ay leedahay ciidamada tirida badan ee xerooyink isaga xaraysan ama magaalooyinka iska kifaaxaya ee aan wax hawlgal ah ku mashquulsanayn. Hab dhaqanka ciidamada ayaa ah in ciidanka la mashquuliyo hadii kale ama asagaa isku mashquuli ama bulshaduu ku mashquuli. Dhinaca kale waxaa arintan laga faa’iidi karaa in wadooyinka u xiran cabsida laga qabo Shabaab ay tahay mid aan sal iyo raad lahayd, hadiiba 20 wiil inta Kismaayo ka bexeen si nabad ah ku gaaray Diif. Kaliya waxaa loo baahanyahay in xil la iska saaro oo isu socodka magaalooyinka lagu soo celiyo sidii hore maadaama aysan jirin awood Shabaab iyo khatar balaaran oo looga baaqsado in gaadiidku si xor ah isugu socdo. Waa suuro gal in loo baahdo ilaalo ka hortagta maleeshiyaadka Shabaabka oo mararka qaar isku dayi kara jidgooyo ay maalmo ka shaqeeyaan laakiin taasi ma hor istaagi karto in isu socodka magaalooyinka caadi laga dhigo.
Wiilasha duurka u cararay iyo ciidamada ka daba baxay ee ku raad jooga wixii ka soo kordha kala soco shabakadani KismaayoNews.